Imandarmedia.com.np: पिपलको रुखले यसरी बचायो १३ जनाको ज्यान, झन्डै बच्चा फुत्किएको !
Main News, Newspaper » पिपलको रुखले यसरी बचायो १३ जनाको ज्यान, झन्डै बच्चा फुत्किएको !
पिपलको रुखले यसरी बचायो १३ जनाको ज्यान, झन्डै बच्चा फुत्किएको !
माडी भैरवपुरकी समा परियारलाई शुक्रबार राति बाँचिएलाजस्तो लागेन ।
अविरल वर्षाका कारण बाढी आएपछि जीवनको अन्तिम घडी हो भन्ने लाग्यो । एक्कासि घरमा बाढी पसेपछि उनले जीवनको आस नै मारेकी थिइन् ।
२७ वर्षीय समालाई आफ्नो भन्दा पनि चार सन्तान जोगाउनै मुस्किल पर्‍यो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
आकाशबाट आएको पानीले बच्चा जोगाउन गाह्रो भएको आमा बुधमाया परियारले बताइन् । पानी घटेपछि स्थानीय युवाले उद्धार गरेर नजिकको शिवालय मन्दिरमा पुर्‍याएका थिए । ‘रातभर पिपलको रूखमा बास भयो’, बुधीमायाले भनिन्, ‘समाउँदा समाउँदै हातबाट झन्डै बच्चा फुत्किएको ।’
घरमा बाढी पसेपछि पिपलको रूखमा चढेर ज्यान जोगाएका समा परियारको परिवार । शुक्रबार राति आएको बाढीका कारण भत्किएको माडीको चितही खोलाको पुल ।
प्रारम्भिक जानकारीअनुसार माडीमा करिब ३ सय घरमा क्षति पुगेको छ ।